अष्ट्रेलियाका जेलमा नेपाली विद्यार्थीहरु पनि
िड्नी । पछिल्लो समय नेपाली विद्यार्थीहरुको प्रमुख रोजाइ अष्ट्रेलिया बन्ने गरेको छ । विस्तारै अष्ट्रेलियामा नेपालीहरुको संख्या बढ्दै गर्दा अपराधका घटनामा नेपालीहरुको संलग्नता पनि देखिन थालेको छ । विभिन्न अपराधमा अष्ट्रेलियाको जेलमा २५ जनाभन्दा बढी नेपालीहरु रहेको बताइएको छ । ... पूरा पढ्नुहोस्
तिमी के लेख्छौ हँ फेसबुकमा ? सयौं लाइक्स आउछन त !’ उसले भन्यो– ‘मेरो कम्पनीको पेजमा पनि त्यति धेरै लाइक्स हुँदैन ।’ ... पूरा पढ्नुहोस्
ष्ट्रेलियामा पढ्न आउने नेपाली विद्यार्थीको संख्या अहिले उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ । अष्ट्रेलियामा पढ्न पाउनु भनेको हरेक विद्यार्थीका लागि एउटा राम्रो अवसर हो । तर, यथार्थ के पनि हो भने यहाँको विद्यार्थी जीवन असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ र हामीमध्ये कैयौँले यी चुनौतिलाई सही तरिकाले सामना गर्ने गर्दैनौँ । ... पूरा पढ्नुहोस्
फगानिस्तानको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एक विद्यालयमा तोप आक्रमण भएको छ । ... पूरा पढ्नुहोस्
रोजगारका लागि नेपाली श्रमिकलाई जापान पठाउने विषयमा सोमबार नेपाल र जापानबीच समझदारी भएको छ । ... पूरा पढ्नुहोस्
िलियम हेनरी ‘बिल’ गेट्स तृतिय,एक अमेरिकी बिजनेश म्यानको जन्म सन् १९५५, अक्टोबर २८ मा भएको थियो । उनी एक बिजनेश म्यागनेट, इन्भेष्टर, लेखक र समाजसेवी हुन् । ... पूरा पढ्नुहोस्
ष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलियाका समाचार माध्यमका अनुसार अष्ट्रेलिया सरकारले अागामी वर्ष दिने स्थायी आवासिय भिजा (पीआर)को संख्यामा कटौती गर्ने योजना बनाएको छ। जस अनुसार अर्को वर्ष अर्थात् सन् २०१९ मा अष्ट्रेलियाले स्थायी बसोबासको... पूरा पढ्नुहोस्
यस्तो पनि ! १४ वर्षको उमेरमा प्रोफेसर
ुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला, १४ वर्षको उमेरमा प्रोफेसर । तर, यस्तै भएको छ । लीसेस्टर विश्वविद्यालयमा एक १४ वर्षीय मुस्लिम किशोर गणित विषयका प्रोफेसर बनेका छन् । याशा एस्लेलाई लीसेस्टर विश्वविद्यालयले अतिथि शिक्षकको रुपमा चयन गरेको हो ।... पूरा पढ्नुहोस्
हट म्याथ टिचरका नाममा प्रख्यात भएकी थिइन यी युवती, के हो यिनको वास्तविकता ?
ेलारुसको राजधानी मिन्स्कमा बस्दैं आएकी ओकसाना नेवेसेलाया नामकी युवतीको फोटो दुनियाँकी सबैभन्दा हट म्याथ टिचरका रुपमा भाइरल भइरहेको थियो ।... पूरा पढ्नुहोस्
मेरिका—भर्जेनिया कमन वेल्थ युनिभर्सिटीमा सह–प्राध्यापक तथा वरिष्ठ कलाकार डिना वाङ्देलको संयुक्त राज्य अमेरिकाको भर्जेनियामा निधन भएको छ । ... पूरा पढ्नुहोस्